Goodax Barre fadlan iscasil! – Radio Daljir
Goodax Barre fadlan iscasil!
Febraayo 2, 2020 3:05 b 0
Taariikhdu marna waa barasho marna waa gacan-ku-hayn. George Santayana (1863—1952), caqliyahan qarnigii labaatanaad, ayaa laga hayaa ooraah oraneysay, “kuwa aan tagtada xasuusan karin waxa ay ku gowracanyihiin kucelinteeda.”
Wasiir Goodax Barre taariikhda dalka iyo dadka Soomaaliyeed war uma hayo ama waxa uu aad ugu hamuunqabaa kucelinteeda.
Warsaxaafadeedkii shalay ee Wasiir Goodax Barre marna ma uu abbaarin dan waxbarasho iyo mid Soomaaliyeed toona, laakiin waxa uu ahaa “foori ey.” Foorida eygu (dog whistle) waa firinbi lagu tababaro eyda, eyga kaliya ayaana maqli kara oo dhegaha dadku ma laha awood ay ku maqlaan. Siyaasad ahaan foorida eygu waa farriin ama farriimo siyaasadeed oo loogu talagalay in dad gooni ahi ay maqlaan, fasirtaan oo haddana ay kuwo kale sii fahamsiiyaan, waxaana loogu talagaley in dadka badankiisu aysan fahmin.
Badanaa foorida eyga waxaa la hawlgaliyaa markii la rabo in dad qooni ah la bartilmaameedsado oo xaqooda la duudsiyo ama laga dhigo dad aan xaqba istaahilin. Laakiin dariiqa xaq-duudsiga waa in marka hore qiil loo helo.
Qiilashu waa kala nooc e, Wasiir Goodax Barre oo taariikhdii shalaydan qoyan aan war u hayn ama u hamuunqaba kucelinteeda waxa uu abbaaray dhowr qodob oo xalaaleeya in meesha Puntland, yar iyo weynba, ay tahay meel aan waxba istaahilin, una furan in si uun laga yeelo.
Aan idin la qaybsanno saddex qiil oo Wasiir Goodax Barre uu u adeegsaday fooridiisa:
1. Waa mar e “in ardey aan shaqeysanin aan la boqrin” oo waa sida uu Wasiir Goodax daliishiisa u abbaarey e, ardeyda Puntland waa kuwo aan shaqeysan, aan tartan galin, sidaas darteedna ardeyga reer Puntland waxa uu Wasiir Goodax yiri “aan la siinin shahaado uusan shaqeysan” maadaama uu yahay ardey aan shahaado u qalmin
1/8: Wasiir Goodax Barre oo weeraray Dowladda Puntland, waxbarashada Puntland, ardeyda Puntland & hoggaanka Puntland: "Mowqifka cad … ee WW waxaa waaye in ardey aan shaqeysanin aan la boqrin oo aan la siinin shahaado uusan shaqeysan." pic.twitter.com/KnV0C03n8V
— Radio Daljir (@radiodaljir) January 31, 2020
2. Waa mar kale e “siyaasadda waxbarashada Puntland dad bay u afduubantahay” buu Goodax raacshay asaga oo sii wata foorida egya, laakiin cidina ma seegin oo asagaaba gadaal ka bayaanshay in dulucda fooridiisu tahay “hoggaanka Puntland, kan hadda jira iyo kuwii ka horreeyaba, yar iyo weyn, waa kuwa aan u afduubanahay, waa kuwa ay Soomaaliya u afduubantahay, waana isla kuwii fadaraalka aan ka dagaalamay qoorta noo surey, oo dhammaantood waa rag isku wada mid iyo midab ah.”
3. Wasiir Goodax oo marakan fooridiisa sii xoojinaya, hubana in uu daliishiisa biyo-ma-galeen ka dhigay, waxa uu raacshay in ‘kuwaas isku wada midka ah ee Soomaaliya ay u afduubantahay’ xataa haddii ay saxiixaan heshiis ay ku matalayaan Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS), aysan dowlad Soomaaliyeed matali karin, heshiiska ay galaana uu yahay waxba kama jiraan, maadaama “heshiiskii Gaalkacyo” uu ahaa mid ay kala saxiixdeen rag isku reer Puntland ah, ahaana heshiis aan Xamar lagu gelin
Mar kale, Wasiir Goodax Barre taariikhda murugsan ee Soomaaliya war uma hayo ama waxa uu aad ugu hamuunqabaa kucelinteeda. Laakiin reer Puntland oo shalay Xamar ku waayey naf iyo nindoorkoodiiba, waxa kaliya oo ay galabsadeena ay ahayd haybtooda, maalkoodiina maantadan qaarkiis weli Xamar xoog loogu haysto, maanta ma aha dad si sahlan taariikhda ku hilmaami kara. Si aan hilmaan meesha u imaanna, abbayaashii Puntland asaasay waxa ay dhidbeen darbi reer Puntland ka xijaaba sunta hayb-naceybku faafiyo, ummaddana kala fogeysa. Waa darbiga FADARAALIISIMKA.
Sidaas darteed maadaama barashada taariikhdu ay gacan-ku-hayn rabto, waa muhiim in Wasiir Goodax Barre uu noqdo cashar subax kasta baraarujiya bulshada reer Puntland iyo kuwo Soomaaliyeed ee dhaawac aan la hilmaami karin ka soo gaaray awoodda urursan ee dowlad dhexe, ama sida Cabdisalaam Salwe uu boggiisa ku qoray: “Hadalka Wasiir Goodax Barre waxa kaliya oo uu igu sii qanciyey baahida loo qabo ‘Federal System’ si cad u kala xadeeya awoodaha iyo sharcigii ilaalin lahaa. Bal malee Goodax oo Madaxwayne ka ah Unitary System [dowlad dhexe] haystana hub iyo dhaqaale? Taa waxa ka dhow Confederation iyo kala-dareer!”
Hadalka @Godahbarre waxa kaliya oo uu igu sii qanciyay baahida loo qabo #FederalSystem si cad u kala xadeeya awoodaha iyo sharcigii ilaalin lahaa. Bal malee Godah oo Madaxwayne ka ah #UnitarySystem haystana hub iyo dhaqaale? Taa waxa ka dhow #Confederation iyo kala-dareer! https://t.co/nlXPHvckYF
— Abdusalam Salwe (@ASalwe) February 1, 2020
Wasiir Goodax Barre ma mooggana khaladka weyn ee uu maanta ka galey bulshada Puntland, yar iyo weyn, iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed; ma mooggana in uu u fooryayo iskudir iyo iskahorkeen bulsho; laakiin waxa uu moogganyahay in badanaa bulshada Soomaaliyeed aysan hamuun u qabin dhiig kale oo daata iyo kacaan yiraahda “reer hebel waa dowlad-diid.”
Sidaas darteed, haddii sharafi u hadhay ha iscaliso Wasiir Goodax Barre. Goodax Barre fadlan iscasil!
Haddii uu Wasiir Goodax intaas garan waayana waxa aan aad ugu rajoweynahay in Villa Somalia ay wasiirka inta uu mudanyahay marsiin doonto oo tusto in uusan astaahilin masuuliyadda Wasiirka Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Soomaaliya. Sida uu Md. Cali Xaaji Warsame, Wasiirkii hore ee Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Puntland, ku qoray boggiisana waxaan ku rajoweynahay in Wasiir Goodax Barre qaadi doono jidkii ay qaadeen Guulwade iyo Wasiir Cabdiraxmaan.
Wasiir Goodax Barre yaan lagu mashquulin, hadalkaas iskama uu oran. C/raxmaan Guulwade Villa Soomaaliya baa u jawaabtey, Wasiir C/raxmaan oo Jaamicadda Ummadda ka hadley RW Kheyre baa ugu jawaabey xil-ka-qaadis. Dooda waxbarashaddu waxay taal @TheVillaSomalia ee aan ka war sugno. https://t.co/NqQnZtHLUK
— Ali H. Warsame (@alihwarsame) February 1, 2020
Laakiin haddii intaas la waayo si mar kale Goodax iyo inta la maanka ahi ay calanka Soomaaliya cid kale ugu hanjabaan, waa bog horleh iyo boog cusub oo ka dillaacday Soomaaliya. Sidaas darteed, hoggaanka iyo haldoorka Puntland ayaga oo maanka ku haya ooraahda “kuwa aan tagtada xasuusan karin waxa ay ku gowracanyihiin kucelinteeda,” haddana maanka ha ku hayeen, hana ka xijaabteen, in Wasiir Goodax Barre uusan ugu horreyn uguna dambeyn doonin siyaasi Soomaaliyeed oo calanka dalka u soo xirta dibindaabyada yarka iyo weynka Puntland.
Qormooyinka Daljir 56 Siyaasadda & Dhaqaalaha 507 Wararka 27053
Afhayeenka JWXO (ONLF) Caddaani Hirmooge oo Tuli Guuleed tagey